Niverina tany Kairo ny sidina EgyptAir rehefa hita ny hafatra fandrahonana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Niverina tany Kairo ny sidina EgyptAir rehefa hita ny hafatra fandrahonana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovao Mafana Egypt • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Niverina tany Kairo ny sidina EgyptAir rehefa hita ny hafatra fandrahonana.
Niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina Kairo ny sidina EgyptAir MS 729 noho ny hafatra fandrahonana avy amin'ny olona tsy fantatra tavela teo amin'ny iray amin'ireo seza fiaramanidina.
Niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina Kairo ny sidina EgyptAir MS729 noho ny hafatra fandrahonana avy amin'olona tsy fantatra.
Niverina tao amin’ny seranam-piaramanidina niainga ilay fiaramanidina 22 minitra taorian’ny fiaingana ary nigadona soa aman-tsara.
Naneno fanairana teo amin'ny Ranomasina Mediterane ny fiaramanidina mpandeha Airbus A220 avy any Kairo ho any Moskoa.
EgyptAir sidina MS 729, mandeha avy any Kairo mankany Moscow, Rosia, dia voatery niverina tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Kairo rehefa nisy hafatra fandrahonana hita teo amin'ny iray amin'ireo seza tao amin'ny kabine lehibe.
"Niverina ny sidina MS 729 noho ny hafatra fandrahonana avy amin'ny olona tsy fantatra tavela teo amin'ny iray amin'ireo seza fiaramanidina," Egyptair hoy ny fanambarana.
"Niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina niainga ny fiaramanidina 22 minitra taty aoriana ary nipetraka soa aman-tsara, dia raisina avokoa ny fepetra ilaina."
Ny fiaramanidina mpandeha Airbus A220 mandeha avy any Kairo mankany Moscow Naneno fanairana tokony ho antsasak’adiny taorian’ny niaingany, satria efa tafita ny Ranomasina Mediterane. Taorian'izay dia niverina tany amin'ny seranam-piaramanidina Kairo ny fiaramanidina.
Araka ny loharanom-baovao avy amin’ny zotram-piaramanidina dia im-betsaka isan-taona ny tranga tahaka izao. Amin'ny ankapobeny, ny hafatra toy izany dia mivadika ho fihomehezan'ny olona iray.
Na izany aza, araka ny fitsipiky ny kaompaniam-pitaterana dia tsy maintsy midina ny fiaramanidina na ahoana na ahoana.
Rehefa migadona, dia hojerena tsara ny fiaramanidina mifanaraka amin'ny fitsipika momba ny fiarovana, hojerena ny mpandeha sy ny entany, ary avy eo dia ampidirina amin'ny sidina hafa.